A mfihlo wachaza
Yabonani, ndinixelela imfihlelo: Asiyi kulala [kufa], kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke, ngephanyazo, xa nakusekuqhwanyazeni kweliso, ngexilongo lokugqibela. Kuba liya kulila ixilongo bavuke abafileyo bengenakonakala, ibe siya kutshintshwa.
Musa ukuba ningazi
Kodwa andithandi, bazalwana, andithandi ukuba ningazi malunga nabo abalele ukufa [wafa], ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba [oko ayigcinwa]. Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa, wabuya wavuka, kwangokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu, kunye naye.
Kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi leNkosi ukuthi, thina babudlayo ubomi, esahleliyo ekufikeni kweNkosi, akukho nto kufuneka eze phambi [wafa] yabalele ukufa. Ngokuba iNkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini inendanduluko waka, ngelizwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, kwaye eyokuqala i abafele kuKristu bavuke.
Emva koko thina babudlayo ubomi, basaseleyo, sixwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni. Kwaye ke sisoloko uya kuba kunye neNkosi.
Ngoko ke khuthazanani ngala mazwi.
Kodwa ukuba amaxesha namathuba, bazalwana, akukho mfuneko yokuba ndinibhalele. Kuba niyazi kakuhle kakhulu, ukuba imini yeNkosi, njengesela ebusuku. Ngoko ke, xa besithi, Luxolo nokunqaba, oko baya kuza ukuwa ngebhaqo födslosmärtan ngumfazi oza kuzala, kwaye abasayi kusinda.
Ke nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela. Nina nonke ningoonyana bokukhanya nabantwana namhlanje. Thina ke andingowawo ebusuku, ubumnyama.
Ngoko ke masingalali, njengabanye aba; kodwa makhe masiphaphe sibe ziingcathu. Kuba abaleleyo balala ebusuku; yaye abo benxila benxila ebusuku.
Ke thina bangabemini masibe ziingcathu, enxibe elukholweni naseluthandweni sifuba, sithwale ithemba lokusindiswa nesigcina-ntloko. Ngokuba uThixo akasimiselanga ngqumbo; usimisele ukuzuza usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu; owasifelayo, ukuze thina, nokuba sibukela okanye ukulala, ukuze ubomi naye.
Ngoko ke, intuthuzelo omnye komnye yaye uppbygg omnye, njengokuba nani.
Musa ulahlekelwe uzibambile
Ke kaloku siyanicela, bazalwana, ngenxa iNkosi yethu uYesu Kristu, nokuhlanganiselwa kwethu kuyo, ukuba akunjalo ngokukhawuleza, ukulahlekelwa intloko yakhe uba kukoyika, ngamoya, nokuba kungelizwi, nokuba nawuphi na unobumba, njengoko zathunyelwa kuthi ngokungathi iselingene imini leyo kaKristu ubesisandla.
Makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo. Ngokuba ngaloo mini akuyi, ngaphandle kokuba inkunkuma [ngokuya ukuguqulela "imfuduko"] sele lwenziwe, atyhileke umntu wesono, unyana wotshabalalo; phendla, nto leyo umchasi, uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, nehlonelwayo, ngokokude uhlala phantsi etempileni kaThixo njengoThixo, ubanga ukuba unguThixo.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 04:35